Indlu yaseFama yaseWellfield, iseti ye-Idyllic kunye nombono omangalisayo
Bansha, County Tipperary, Ireland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguChristine
Balekela elizweni kwindlu yethu yasefama enomtsalane nephangaleleyo. Ilungele iintsapho/izibini/amaqela/abakhweli/abahambi ngebhayisikile. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kunye nokuphumla kubuphithiphithi bobomi bale mihla. Ifakwe kwi-1km ukusuka kwilali entle kakhulu yaseBansha. Jonga iGlen yeAherlow ekufutshane, iikhosi zegalufa, iRock of Cashel nokunye okuninzi. Ibekwe kwindawo esembindini ukuze ukhenkethe yonke le nto iTipperary kunye neMunster. Ilungele iindwendwe ezize emitshatweni ekufutshane neKilshane House, iBansha Castle kunye neAherlow House.
I-Wellfield Farmhouse, eyayikade ilikhaya lethu losapho, ipholile kodwa ibanzi kwaye igcwele ubuntu. Phezulu kukho amagumbi okulala amabini amakhulu, elinye lineen-suite, igumbi elinye elinamawele kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo ukuhlalisa iindwendwe ezi-6. Kukho igumbi lesine elinesihlomelo kwigumbi eliphezulu elinokulungiswa ngentlawulo eyongezelelweyo yeendwendwe, ukuba ngaphezulu kokuba iindwendwe ezi-6 zihlala nathi okanye ufuna ukusebenzisa igumbi lesi-4.
Eli gumbi lokulala lesine lineebhedi ezimbini ezingatshatanga, nceda usazise kwangaphambili ukuba ufuna eli gumbi lilungiswe.
Kumgangatho ongezantsi uya kufumana ikhitshi elikhulu, elixhotyiswe ngokupheleleyo elinegumbi lokutyela elahlukileyo. Igumbi lokuhlala elineebhedi ezitofotofo lineTV kunye neDVD player. Kwakhona kumgangatho ophantsi kukho igumbi eliluncedo kunye nendlu yangasese. Sineholo enkulu yokumema kunye negumbi lokudlala labantwana elixhotyiswe kakuhle. Kukho intendelezo enkulu evaliweyo ngasemva kwendlu yasefama (ikhuselekile kubantwana abancinci), iingca ezicandiweyo kunye negadi ephakanyisiweyo ngaphambili apho unokukonwabela ukuphefumla ukuthatha iimbono. Ininzi indawo yabantwana (kunye nabantu abadala) ukuzonwabisa kwaye bahlolisise indlu yomthi ephakamileyo efihliweyo emithini !!!
4.97 ·Izimvo eziyi-65
4.97 · Izimvo eziyi-65
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi65
IWellfield Farmhouse ibekwe bucala kakhulu ngaphandle kwelali yaseBansha. Indawo efanelekileyo yokuthatha ixesha lokuphumla kuxolo kunye nokuzola kumaphandle aseIreland.
Iindwendwe zinokuphonononga iGlen entle yaseAhelow kunye neeNtaba zeGaltee ngexesha lokuhlala kwazo nathi. Kukho iindlela ezininzi zokuhamba ngeenyawo / iibhayisekile ezibonelelwayo. ILiwa elimangalisayo leCashel kunye neCahir Castle nazo zikufuphi ukuba uzonwabele. Ezinye izinto ezinomtsalane zalapha ekhaya ziquka ukukhwela ibhayisekile yeentaba, iikhosi zegalufa ezininzi, i-pitch&putt, ukuloba, ukukhwela intaba, umdyarho wamahashe, indawo yokuqubha yangaphakathi kunye nebala lokudlala kunye nembasa ephumelele ibhaso kwindawo zokutyela zasekhaya.
Ukuba ufuna ukuqhubela phambili kukho iindawo ezininzi ezifanele ukutyelelwa.
Iilwandle zeflegi eziBlue zaseClonea naseArdmore zingaphezulu nje kweyure enye.
I-Waterford Greenway, i-Suir Blueway, i-Bunratty Castle, i-Cliffs yase-Moher, i-Mitchelstown caves, i-medieval city yase-Kilkenny kunye ne-castle yase-Kilkenny ziziphakamiso ezimbalwa zohambo olugqibeleleyo lwemini ukusuka kwindawo yethu.
Uya kufumana okuninzi okonabisa abancinci nabadala ngexesha lokuhlala kwakho nathi
Sikwayindawo efanelekileyo yeendwendwe eziya emitshatweni okanye kwimisebenzi ekufutshane neKilshane House (5min drive), iAherlow House Hotel (15min drive) okanye iBansha Castle (1km) .
IBansha Village ikumgama nje oyi-1km apho uya kufumana iivenkile ezimbini ezigcwele kakuhle, isikhululo sepetroli, ukutya okukhawulezayo, icawa kunye neNellies Bar.
Kukho indlela yabucala kwindlu yasefama ngoko ke yenza indawo yokupaka imoto ikhuseleke kwaye ikhuseleke. Sinezibane zoluvo kunye neekhamera zeCCTV eyadini ngaphandle ukhuseleko lwakho kunye nokhuseleko.
Siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kwaye sithatha ulwaneliseko olukhulu lokuqinisekisa ukuba ukonwabela ukuhlala kwakho. Siqhuba ifama yobisi kwaye sihlala kumgama oziikhilomitha ezi-3, ngoko ke sihlala sifowuna ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Christine
Sitsalela umnxeba nje kwaye siya kuhlala sikhona ukuze sikuphendule imibuzo.